Karaiba: Tsy Afa-Miala; Mamely i Isaac · Global Voices teny Malagasy
Maro amin'ireo nosy no miezaka miala amin'ny korontana navelan'ny fandalovan'ny rivodoza na dia teo aza ny fanantenan'ny mpitoraka bilaogy Karaibiana fa handalo mora foana (tsy hamela takaitra loatra) eo amin'izy ireo ny Rivodoza tropikaly Isaac. Efa niaina ny voka-dratsy nateraky ny haratsin'ny andro i Haiti; tondra-drano sy fihotsahan'ny tany niteraka fahafatesan'olona vitsivitsy. Ny olona sasany tsy maintsy nasaina niala teo amin'ny tranony.
Nametraka ity sary ity izay misy ny fahasimbana teo akaikin'ny seranam-piaramanidina teo an-drenivohitra, Port-au-Prince, ny mpanao gazety @jacquiecharles eo amin'ny Twitter, ary i @planuk kosa nametraka ny sarin'ny tondra-drano mahery teo akaikin'i Jacmel. Sary maro hafa mikasika ny fahasimbana nataon'ny rivodoza eo amin'ny bilaogin'i Carel La, eto, miaraka amin'ny lahatsary eto sy eto.
Nanomboka nahare ny fisian'i Isaac ihany koa i Jamaika tao anatin'ny adin'ny roa ambinifolo izao. Mitatitra mikasika ny oram-be mikija sy ny rivotra mitsoka ny mpampiasa Facebook. Nanaraka ny rivodoza ity i Girl with a Purpose ary mitatitra toy izao:
Manamafy ny mpitoraka bilaogy ao amina lahatsoratra vao nohavaozina…
Manohy mijery ny fivoarany i Havana Times, raha mitoraka bilaogy avy any Kioba. Toy izao ny nosoratany tamin'ny lahatsoratra farany:
Manohy ny diany any Florida i Isaac, ary maro ireo mpitoraka bilaogy Kiobana ampielezana no manaraka ny fivoarany. Lahatsoratra iray manokana no miresaka ny olana amin'ny fitantaran'ny The Weather Channel:
FANAVAOZANA: Toa tahaka ny hoe sambany no nidiran'ny Weather Channel teto Kioba. Mazava ho azy fa milalao miaraka amin'ny lalàna napetrak'i castro sy ny tariny ry zareo.
Avy amin'ny Official U.S. Navy Imagery, ny hajian-tsary nampiasaina tato amin'ny lahatsoratra, “Rivodoza Tropikaly Isaac any atsimon'i Hispaniola”, nampiasana noho ny fahazoan-dalana Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Creative Commons license. Tsidiho ny lahatsary flickr Official U.S. Navy Imagery.